विदेशिएकी चेलीको तीज सम्झना–पतिको दीर्घायुको कामना गरेर व्रत बस्ने कि नबस्ने ?
रोशिना अधिकारी, बेइजिङ
चीनको राजधानी बेइजिङस्थित एउटा अग्लो भवनको झ्यालबाट बाहिर एकटकले नियालिरहेकी छु । एउटा सानो पहाड अघिल्तिर मेरा आँखा ठोकिइरहेका छन् । त्यस पहाडले मेरो मातृभूमि र माइतीघरको याद दिलाइरहेको छ र मुटुमा दर्दको तीखो धार चलाइरहेको छ । विवाह गरेर भर्खरै माइतीघर र डाँडाकाँडाको आफ्नो मातृभूमि नेपाल छाडेर परदेशिनु परेकाले होला, गाउँघरको (होमसिक)याद यति गहिरोसम्म गढेको छ ।
यहाँ न कुनै नेपाली चेलीबेटीहरूसँग जमघट हुनसक्छ । न कुनै आफन्तले दर खानका लागि निम्त्याउँछन्, न कुनै दौंतरीहरूसँग उन्मुक्त भएर नाच्दैगाउँदै तीजको रहर मेटाउन सकिन्छ । अथाह तृष्णा मनभित्र गुम्सिएको छ मानौं यो शहर अहिले भर्खरैका लागि एउटा निर्मम कारागार जस्तो बनेको छ । झ्याल बन्द गर्छु र एकछिन रसाउँदै गरेका नयन बन्द गर्छु, हृदयमा कता कता गाउँघरका आमा, फूजु, माइजु वा संगिनीहरूले हाँसिमज्जाक गरेको जस्तो ठान्छु । झसंग हुन्छु, यति मीठो तन्द्रा एकैछिन पनि टिक्न सक्दैन । यो परदेशमा कहिले दशैंजस्तो आउने रहेनछ, कहिले तिहार जस्तो हुने रहेनछ, कहिल्यै तीज जस्तो आत्मीयता छाउन पनि सक्दोरहेनछ ।
सम्झनाको अथाह मरूभूमिमा आफ्नो भाषा संस्कृति, कला, लोकजीवन खोज्दै भौतारिनुजस्तो पीडा अर्को के हुन्छ होला ? यतिखेर मेरो मानसपटलमा केवल स्मृतिको चक्का घुमेजस्तै आफ्नो अतीत घुम्न थालेको छ । शायद वनको चरी वनमै रमाउँछ । म यो परायभूमिमा कतिदिन रमाउने प्रयास गर्न सकूँला ?
विहे गरेर पराइ घर नजाउन्जेलसम्म म घरकी एक्ली प्यारी छोरी थिएँ । तीज आयो कि बारी कान्ला कुद्दै वल्लो घर र पल्लो घर गर्ने, बारीबारी र रूखरूख चढेर फलफूल सोत्तर पार्ने ती उन्मत्त बालापनका क्षणहरूले शायद अब मेरो जीवनमा पुनर्वहाली पाउने छैनन् । भनेजस्तो खानुपर्ने, देखेजस्तो लाउनुपर्ने त्यो पुल्पुलिएको एक्ली छोरीको लाडप्यार अब उसैगरी पाइने छैन ।
पात्रोमा दोहोरिरहने चाडवाडले कहिल्यै पनि निजगढदेखि हेटौंडाको दूरी भनेनन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि घरबाट केही घण्टा टाढिनु परेपनि चाडवाडले कहिल्यै मेरो अभाव झेल्नुपरेन । कि त दाइभाइ, कि त बुबा स्वयं आएर लिएर घरसम्म लैजानुहुन्थ्यो र ती क्षणिक विछोडहरू पनि क्षणिक मिलनले नै गहिरा भैहाल्थे । अब त गाउँघरमा चाडपर्वको रौनक र सखी चेलीबेटीहरूको सुमधुर भाका नै सुन्न पाइने छैन। अतीतका तिनै मनोरम क्षणहरूले आज आँखाहरू रसिला बनाइरहेछन्।
समयको चक्रमा घुमिरहनुपर्ने जीवनको नियति नै रहेछ शायद। यो समयले कहिलेकाहीं कति चाँडो कोल्टो फेर्दो रहेछ भने बाबाआमाको काखबाट विदा भएर कोही परायको आफन्त भैदिनुपर्ने। दुईचार अक्षर पढ्ने बित्तिकै डोली चढ्नुपर्ने कस्तो जीवनचक्र ? डोली चढिसकेपछि त जस्ले सिन्दुर हाल्यो, उस्कै हुनुपर्यो, सिन्दुरको मालिकले जता लग्यो उतै जानुपर्यो । विदेशिनु उसको बाध्यता रहेछ, उसका बाध्यतामा एकाकार हुन पनि बाध्य नै हुनुपर्यो ।
घरआँगनबाट टाढिएपछि अब कहाँ टेक्न पाइन्छ र गरा खेतबारी ? कहाँ देख्न पाइन्छ र संगिनीहरूले गाउँ टोल थर्काउँदै गुञ्जाएका तीजका भाकाहरू? कहाँ मर्काउन पाइन्छ र यो बारूले कम्मर? उतिबेला भावी पति सोचेजस्तो होओस् भनेर व्रत बसिन्थ्यो । थाहा छैन, सोचेजस्तै पति पाइयो कि पाइएन ? अब उसको दीर्घायुको कामना गरेर एक परम्परागत घरानाकी छोरीले निराहार व्रत बस्ने कि नबस्ने ? यतिखेर ठूलो दोधारमा छु ।
बिहानैदेखि दिदीबहिनीहरू रंगीचंगी वस्त्र पहिरिएर मन्दिरमा पूजा पाठ गरेर घनघोर गीतहरू घन्काइरहेका छन्, सबैमा शुभकामना, हिमालपारीको देशबाट ।
अब केही दिन भारी वर्षाको सम्भावना छैन, आत्तिनु पर्दैन - मौसमविद् काठमाडौँ - मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालको तराई भू–भागबाट दक्षिणतर्फ सरेको छ । न्यूनचापीय रेखा (वर्षा गराउने वायु) दक्षिण सरेकाले अबका तीन–चार दिन भारी तथा अविरल वर्षाको सम्भ...